Qu’annoo Netwoorkii Geejiba S ochootuu kan Magaalota Lakkuu (Oromo) Survey
Qu’annoo Netwoorkii Geejiba S ochootuu kan Magaalota Lakkuu (Oromo)
Ibsa gabaabduu kan Pirojektii
Bara 2021 eegalee, Magaalota Lakkuu keessatti tajaajila humna guuttachuu kan hawaasaa dabalatee, netwoorkiin buufata humnaa kan konkolaataa ellektirikaan hojjetuu haaraan ni jiraata.
Netwoorkiin kun kan inni ittiin utubamee jiru, tajaajila qooddannaa konkolaataa kan humna ellektirikaatiin socho’uutiin.
Qooddannaa konkolaataa kan akka oloota waliin konkolaataa qooddachuu fi yeroo moodiin geejiba kan biroo fedha keessan guutuu hin dandeenye qofaa konkolaachisuu yaaduu.
Pirojektiin kun kaayyoo namoota naannoo Magaalota Lakkuu keessa jiraataniif carraa geejiba qulqullaa’aa fayyadamuu mijeessuu, aksiyoonii geejibaa ol kaasuu, fi argama buufataalee humnaa kan hawaasaa dabaluuf hojjetu yaalii kan waliinii ti.
Namoota abbaa qabeenyaa dhuunfaa gad aanoo ta’anii fi namoota bifa garaagaraa irratti dhiibbaa faalamaa fi jijjiirama haala qilleensaa kan wal hin madaalle jiraachuu isaa mirkaneessina.
Dhiibbaawwan kunis namoonni hawaasa keenya keessa jiraatan kan guyya guyyaatti isaaniin quunnamu, rakkoo sanyummaan kan wal qabate kan babal’isuu dha. Addumaan, akka hawaasa keessan keessaatti fedhii fayyaalessa ta’ee fi itti fufiinsa qabaachuudhaan konkolaataa keenya kan ellektirikaan hojjetu iiti fayyadamuu keessan hubannoo qabaachuu barbaanna. Mata dureewwan kana ilaalchisee miseensota hawaasaa irraa yaada isaanii dhaga’uun kan inni gargaaru fedhii fi barbaacha hawaasa keenyaa tajaajila calaqqisiisuu danda’u bocuuf.
Ibsa bu’uuraa muraasa waa’ee pirojektii kanaa :
Adeemsa kallattii gar-tokkee: Miseensota qooddannaa konkolaataa kan ta’an naannoowwan tajaajilaa kam iyyuu keessatti fe’achuu fi buusuu ni danda’u (kunis naanno squer maayilii 35 keessatti) . Miseensonni imala kallattii gar-tokkee ykn gar-lamaa, akkasumas konkolaataa naannoo tajaajilaa keessatti bakka dhaabbii seerawwaa ta’e dhaabuutu danda’ama.
Tilmaamaan buufata humnaa hanga 70 ta’an: Tokkoon tokkoon buufata kanaatti chaarjerii 3 hanga 4 ta’antu argama.
Chaargeriin kun muraasni isaanii miseensota qooddatoota konkolaataatiif kan eegamu yoo ta’u, muraasni ammoo hawaasa kan tajaajilu ta’a.
Tilmaamaan Qooddannaa konkolaatota humna ellektirikaatiin hojjetan 150 ta’antu miseensonni akka itti gargaaramaniif 24/7 kan ta’uuf qophaa’ee argama.
Tokkoon tokkoon konkolaataa yoo baay’ate saa’atii 72 kan ta’uuf tursuu dandeessu.
Kaffaltii miseensummaa yartuudhaan, kenniinsa gatii daqiiqaa tokkoo
Miseensummaa HOURCAR tiif gaafachuun kan inni barbaachisuuf gumii qooddannaa konkolaataatti dabalamuuf. Namni umuriin isaa 18 fi yoo xinnaate hayyama konkolaachisummaa kan waggaa tokkoo kan galmee konkolaachisuu gaarii ta’e qabu kamiyyuu gaafachuu ni danda’a. Siistema kana caalmaatti mijataa taasisuuf, akkaataa fayyadamaa salphaa ta’e uumaa jirra.
Pirojektii kana bocuuf akka nu gargaaruuf gumii xiyyeeffannoo walitti qabannee jirra, amma garuu isin irraa dhaga’uu barbaanna!
Qu’annoo armaan gadii keessatti hirmaannaa taasisuudhaan netwoorkiin kun hawaasa keessaniif filatamaa akka ta’uuf maaloo nu deggeraa.
Qu’annoon kun daqiiqaa 5-10 fudhata. Dursinee isin galateeffanna!
Beeksisa Barbaachisoo ta’an:
Magaalaan Saint Paul odeefannoo kana kan isheen walitti sassaabduuf pirojektii Netwoorkii Konkolaataa Sosochootu Humna ellektirikiin hojjetu kan Magaalota Lakkuu beeksisuuf. Odeeffannoon isin gumaachitan odeeffannoo hawaasaa fi qaama odeeffannoo kana gaafateef kan qoodamu ta’a. Magaalaan Saint Paul qu’annoo kana irraa odeeffannoo argate, Magaalaa Minneapolis dabalatee, shariikota pirojektiitiif kan qoodu ta’a. Maaloo, hubadhaa odeefannoo dhuunfaa keessanii kam iyyuu kennuun isin irraa hin eegamu, haata’u iyyuu malee, waa’ee pirojektii kanaa ilaalchisee odeeffannoo hammayyoome argachuuf e-meeeyilii keessan yoo kan nuuf qooddan ta’e iccitiidhaan kan qabamu ta’a.